बेलारुसी फुटबल खेलाडी, मिडफिल्डर, Aleksandr Pavlovich Gleb 1981 मा राष्ट्रको राजधानी मा जन्म भएको थियो - मिन्स्क। यो खेलाडी एक पटक बेलारुस को सबै भन्दा राम्रो फुटबल खेलाडी को शीर्षक प्राप्त र एक पौराणिक खेलाडी, अन्तर्राष्ट्रिय वर्ग को खेल को मास्टर छ छैन। जर्मन, अंग्रेजी र स्पेनी - उहाँले तीन सबैभन्दा शक्तिशाली युरोपेली महादेशमा च्याम्पियनशिप को प्रत्येक काम गर्ने आफ्नो सरकार, को मात्र प्रतिनिधि हो।
बाल्यकाल र पहिलो फुटबल कदम
बाल्यकाल देखि अलेक्जेन्डर तथापि, फुटबल लागि रोज्न उसलाई मिन्स्क "डायनेमो" को व्यवस्था को फुटबल खण्डमा छ वर्ष पुरानो केटा ल्याए जो आफ्नो बुबा, मदत, खेल को रुचाउनु थियो। युवा फुटबल खेलाडी को डायनेमो फुटबल स्कूलमा धेरै वर्ष बिताए, त्यसपछि Bate मा संलग्न जारी गर्ने निर्णय - Borisov को शहर मा स्थित क्लब। अलेक्जेन्डर सत्र वर्षको हुँदा, उहाँले 1999 मा यसको संरचना मा व्यावसायिक सम्झौता को Borisov टोलीसँग हस्ताक्षर, त्यो ठूलो फुटबल क्षेत्रमा पहिलो आए, र बेलारुस को च्याम्पियनशिप जित्यो।
व्यावसायिक क्यारियर सुरुवात
को पिच मा रमणीय कार्य मिडफिल्डर विदेशी देख्ने को stares देखि उम्कन सकेन र निम्न वर्ष खेलाडी जर्मन उहाँले सहायता Shpilevsky प्रबन्धक संग गए जहाँ "श्टुटगार्ट", निमन्त्रणा गरिएको थियो। सँगै उसलाई त्यो सारियो, र आफ्नो भाइ Vyacheslav त्यहाँ रूपमा - क्लब 150 हजार यूरो लागि किनेको छ दुवै खेलाडीहरू को अनुबंध। जर्मन फुटबल टोली शीर्ष स्तरमा उठेर मा थियो।
छैन एक पटक Aleksandr Gleb टीम को कोर मिल्यो छ म मद्दत गर्न सकिएन तर टाउको कोच सूचना, प्रशिक्षण sparring मा परिश्रम खेती जारी, "श्टुटगार्ट" Magath, अन्ततः उसलाई आधार मा एक ठाउँ सुम्पनुभयो। अलेक्जेन्डर इमानदार पाँच वर्ष ठेक्का काम गरे। 170 भन्दा बढी आधिकारिक म्याचको एक टोली माथि बिताएपछि प्लेयर गर्दा सबै भन्दा राम्रो प्रतिष्ठा कमाउन जर्मन च्याम्पियनशिप raspasovschika, अधिक तीन दर्जन जनावर गोल गरेका थिए।
थप क्लब क्यारियर
लन्डन "शस्त्रागार", जो "श्टुटगार्ट" प्लेयर 15 लाख यूरो को स्थानान्तरण लागि भुक्तानी - जर्मन क्लब संग सम्झौता को समापन मा, सिकन्दरले अंग्रेजी प्रिमियर लिग मा शीर्ष क्लब को एक मा आफ्नो व्यावसायिक सीप लागू गर्ने निर्णय गरे। अलेक्जेन्डर debut आघात द्वारा marred 2005 मा Gunners, र जर्मनी आफ्नो आसन्न फिर्ती बारे अफवाहहरु, तर निम्न सिजन प्लेयर अझै पनि आधार मा एक foothold बढाउनका व्यवस्थित रूपमा, उत्कृष्ट खेल देखाउन थाले र चाँडै टोली नेताहरूले एक भए। क्लब को भागीदार बारम्बार Gleb र उहाँलाई playmaker र winger रूपमा स्थिति खेल्न अनुमति जो आफ्नो बहुमुखी प्रतिभा, ढुक्क औंल्याउनुभयो। लन्डन क्लब मा Aleksandr Gleb लगभग अन्तर्राष्ट्रिय कप, च्याम्पियन्स लिग अन्तिम गर्न टोलीसँग पुग्यो जीत व्यवस्थित। को "शस्त्रागार" फुटबलको लागि उहाँले लगभग 90 मिलान प्ले र सात गोल।
को exhortations बावजुद ट्राफियों, Gleb को कमी संग असन्तुष्ट, Arsena Vengera, 2008 मा कातालान आफ्नो सपना पूरा गर्न आशा राखेका थिए, जो "बार्सिलोना", सारियो। तर यसलाई बन्द, यो आफ्नो निर्णय प्लेयर गरेको क्लब क्यारियर को अन्त को शुरुवात थियो। आघात, फुटबल सेना मा अनिश्चितता कोच, अलेक्जेन्डर नचाहनु भाषा सिक्न - यो सबै Catalans को एक भाग मा एक foothold पाउनको लागि खेलाडी को क्षमता मा नकारात्मक प्रभाव छ। फलस्वरूप, यस प्लेयर शर्ट "बार्सिलोना" मा पिच 18 आधिकारिक मिलान थियो, र पनि एक कप च्याम्पियन्स लिग टोली र त्यसपछि पट्टा को शुरुवात जित्यो। दुई पल्ट प्लेयर फुटबल खेलाडी र क्लब करार को प्रारम्भिक समापन आए, जो पछि "वल्फ्सबर्ग" र "बर्मिंघम सिटी", भ्रमण गर्नुभएको थियो।
2012 मा, "को रूसीहरूले को पंख" Aleksandr Gleb सामेल जो एक टोली, भयो। फुटबल खेलाडी आधा उहाँले आफ्नो पैतृक BATE फर्के जो पछि, सामारा टोली लागि प्ले। आफ्नो पहिलो क्लब संग, खेलाडी, एक वर्षको लागि एक सम्झौता हस्ताक्षर त त्यसै अवधिको अर्को गरेर विस्तार। प्रारम्भिक 2014 मा, बेलारूसी मिडफिल्डर टर्की "Konyaspor" टोलीसँग एक सम्झौता हस्ताक्षर भएको छ, तर किनभने कोच संग संघर्ष को चाँडै क्षेत्र मा जाने भएनन्। मिति गर्न सम्झौता द्वारा टर्की "Genclerbirligi" र उहाँले midfildera आक्रमण को स्थिति मा एक फुटबल खेलाडी खेल्छ जहाँ Aleksandr Gleb, हस्ताक्षर भएको थियो।
2000 मा, खेलाडी BATE कोच बेलारुस को युवा टोली याद र Gleb 2004 युरोपियन च्याम्पियनसिपलाई को फाइनल मा भाग जहाँ टीम, मा जवान प्रतिभा निमन्त्रणा। एक युवा टीम को लागि, अलेक्जेन्डर 24 मिलान5गोल।
2001 देखि, एक फुटबल खेलाडी वयस्क राष्ट्रिय टोली लागि खेल्छ, र केही समयको लागि राष्ट्रिय टीम को कप्तान थियो। 2002 देखि 2008 को अवधि मा अलेक्जेन्डर छ पटक देश मा सबै भन्दा राम्रो खेलाडी पहिचान। उहाँले पनि पहिलो बेलारूसी फुटबल यूईएफए द्वारा मुख्य प्रतियोगिताको को फाइनल मा खेलेका खेलाडीहरू छ।
लुकास Barrios: सबै भन्दा प्रसिद्ध परागुयन Strikers एक को जीवन र क्यारियर
Luís Neto - गर्न रूसी पोर्चुगिज
सर्जियो Busquets - जीवन, जीवनी र प्रसिद्ध स्पेनिश खेलाडी को क्यारियर
जो टोली हाल Marat Izmailov प्ले?
कम बोसो पनीरों, मुलायम पनीरों, मसालेदार पनीरों
Anapa मा स्मारक "सेतो टोपी" - स्पा शहर एक प्रतीक
टी2ट्युनर: समीक्षा र प्रशंसापत्र। डिजिटल टेलिभिजन लागि ट्युनर
Aleksandr Molochko: जीवनी, व्यक्तिगत जीवन, पेसा
केक "इन्द्रेणी" वा इन्द्रेणी केक। व्यञ्जनहरु, रंग विकल्पहरू
निवेश आकर्षित एक तरिका रूपमा बन्धन मुद्दा
कीरा सलह: खान के? जहाँ बसोबास?
छोराछोरीको nosebleeds - कारणहरू, पहिलो सहायता
एक स्टाइलिस्ट रूपमा राउन्ड अनुहार लागि ठीक बाल लागि Hairstyles छनोट?
एन्ड्रोइड उपकरणमा फर्मवेयर कसरी परिवर्तन गर्ने?